एउटै ऋणका १९ तमसुकः मिटर ब्याजबाट पीडित १९९ जनाले साढे ४ वर्षदेखि न्याय पाएनन् - Samatal Online
एउटै ऋणका १९ तमसुकः मिटर ब्याजबाट पीडित १९९ जनाले साढे ४ वर्षदेखि न्याय पाएनन्
१५ भाद्र २०७६, आईतवार Santa Kumar Shrestha0Comments
काठमाडौँ । पशुपति मन्दिरमा सर्लाही हरिपुरकी रिनादेवी साहले भाकल गरिन्, ‘भगवान हमरा न्याय दिय । हमर मनोकामना पूरा होयत त नरिवल चढायब ।’ यसरी न्यायको याचना गर्दै भाकल गरेको डेढ वर्ष भइसक्यो । तर उनको पुकार पूरा भएको छैन । त्यसैले उनी सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटका आफूजस्तै मिटर ब्याजपीडित ५३ जनासँग फेरि काठमाडौं आइन् ।
माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा सामेल भइन् । शुक्रबार सिंहदरबार गएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटिन् । सरकार हाँकिरहेको दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमक्ष पनि याचना गरिन् । तैपनि उनका आँखा ओभाएका छैनन् ।
रिनादेवीका कथा सर्लाही र आसपास जिल्लाका धेरैका निम्ति नयाँ होइन । ०७४ पुस दोस्रो साता काठमाडौंको ठिही झेल्दै सर्लाहीको जब्दी, पिपरियालगायत ठाउँका ३० महिलासहित ३६ जना न्यायको खोजीमा काठमाडौं आएका थिए । एक साता भौंतारिएर उनीहरू रित्तो हात फर्किए ।
यो डेढ वर्षको अवधिमा उनीहरूले न्याय त पाएनन् नै, आफ्नो पीर गम्भीरतासाथ सुनिदिनेसमेत कोही भेटेनन् । न्यायप्रणाली, प्रशासन र विधिलाई कागजी खेलको भरमा आफ्नो हातमा लिँदै मिटर ब्याजको धन्दा चलाइरहेका सर्लाहीका श्याम प्रदेशी भन्ने श्यामकृष्ण साहले उनीहरूलाई निरन्तर धम्क्याइरहे । फर्जी कागजका भरमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा–मामिला गर्दै अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराइराखे ।
सावा अक्षरसम्म नचिन्ने रिनाको हैरानीको कथा ०७२ असोज पहिलो साता सुरु भएको थियो । श्रीमान् प्रमोद मलेसिया जाने भएपछि उनलाई स्थानीय एजेन्टलाई बुझाउन ५० हजार रुपैयाँ चाहिएको थियो । पाठेघरको उपचारका लागि आफैंलाई पनि केही पैसा खाँचो परेको थियो । गाउँलेले उनलाई सजिलै ऋण दिने साहु भनेर चिनिएका श्याम प्रदेशीकहाँ जान सुझाए । श्यामले दुई लाख ९० हजार रुपैयाँ ऋण दिने भए । तर अरूलाई जस्तै ऋण दिएबापतको कमिसन भन्दै श्यामले तीस हजार आफैं राखे ।
२ लाख ६० हजार दिएर २ लाख ९० हजारकै कागज गराए । त्यतिले मात्रै नपुगेर श्यामले उनका श्रीमान्, सासू र दिदीका नाममा पनि ऋण लिएको फरक–फरक ७ वटा कागजमा हस्ताक्षर गराए । श्रीमान् मलेसिया पुगेर धेरथोर कमाउन थाले । जति श्रीमान्ले कमाएर पठाउँथे, सबै रिनाले साहुलाई बुझाउँथिन् । रिनाको ख्यालमा उनले बारम्बार गरेर ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेकी छन् । श्रीमान्ले पठाएको रकमले नपुगेर भएको जम्मा १० धुर घडेरी पनि ऋण तिर्नकै लागि बेचिन् । जति पटक रकम तिर्दा पनि श्यामले पैसा घटेको हिसाब देखाएनन् । बरु ब्याजमा स्याज जोड्दै साँवा रकम बढाइरहे । श्रीमान् मलेसियाबाट फर्किंदा उनीसँग न रकम जोगाड थियो न ऋण घटेको थियो । श्यामले उल्टै १४ लाख तिर्न बाँकी रहेको कागज देखाए । त्यतिले नपुगेर एकदिन आफ्नो घर बोलाई रिनालाई अर्को कागजमा औंठाछाप गर्न लगाए । उनले पछि थाहा पाइन्, उक्त कागजमा ९० लाख ऋण लिएको ब्यहोरा रहेछ ।
आँखाको डिलभरि आँसु बनाएर भासिएको स्वरमा उनले सुनाइन्, ‘एकदिन त १२ वर्षकी केटी खोजेर ल्याइदे, अनि बल्ल तेरो ऋणको कागज फिर्ता गर्छु भन्यो ।’ वाक्यको अन्तिम शब्द निस्कने बेला उनको आँसु चिउँडो हुँदै झरिसकेको थियो ।
धन्न रिनालाई श्यामले अदालतमै मुद्दा हालेका छैनन् । एक–दुई पटक उनका श्रीमान् गएर नबाझेको भए अन्य दुई दर्जनभन्दा धेरै ऋणीलाई झैं उनलाई पनि अदालतमा मुद्दा हालिसकेका हुन्थे । अदालतले श्यामले बुझाएको कपाली तमसुकको भरमा उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको हुन्थ्यो ।
कागजमा भएअनुसारको ऋण तिर्न श्यामले बारम्बार धम्क्याएपछि रिनाले मोबाइलको सिम बदलेकी छन् । उनी डरकै कारण सर्लाहीको हरिपुर छोडेर चितवनको शक्तिखोरमा ज्याला मजदुरी गरेर दिन
कटाइरहेकी छन् ।
सर्लाही नवलपुरकी फातमा खातुन मिटरब्याजको यही पासोमा परेको तीन वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो । १८ वर्षीय कान्छो छोरा अफरोज अन्सारीलाई कतार पठाउन एजेन्टले डेढ लाख मागेपछि उनी ऋण खोज्दै प्रदेशीको शरणमा पुगेकी थिइन् । तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियासहित खाडीका ७ मुलुकमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा कामदार पठाउने निर्णय गरेको चार महिनापछि फातमा एजेन्टलाई डेढ लाख तिर्ने सर्तमा छोरालाई कतार उडाउन कस्सिएकी थिइन् । छोरा कतार उड्ने तयारीमा लागिसकेको थियो तर एजेन्टको हातमा बुझाउने पैसा नभएर उनी फिटफिट परेकी थिइन् ।
फातमाको परिबन्द बुझेका श्यामले ऋण त दिए तर २३ हजार कमिसन काटेर ७७ हजार मात्रै । फातमाले त्यही पैसा लिएर श्यामले भनेअनुसार कागज गरिदिइन् । श्यामले परिबन्दको फाइदा उठाउँदै फातमा, उनको जेठो छोरा परवेज र कान्छो छोरा अफरोजको नाममा तीनवटा कागज गराए । फातमाले पछि मात्रै थाहा पाइन्, तीनै जनाको कागजमा ४–४ लाख गरेर १२ लाख ऋण लिएको लेखिएको रहेछ । श्यामले ऋण दिएबापत भन्दै आफूलाई एक हजारको बियर र एक हजारको खसीको मासुसमेत किन्न लगाएको उनले बताइन् ।
उनले प्रत्येक महिना ५/५ हजारको दरले ब्याज बुझाइरहिन् । ऋण चुक्ता गर्न भनेर तीन महिनासम्म मासिक दस–दस हजार तिरिन् । एक पटक त ब्याज बुझाउन एक दिन ढिला भएको भनेर एक हजार हर्जाना पनि तिरिन् ।
त्यतिले नपुगेर करिब दुई वर्षअघि एक दिन श्यामले उनको हातै समात्न खोजे । पछ्यौरीको फेरोले आँसु पुछदै उनले सुनाइन्, ‘त्यसले गन्धा हर्कत गर्‍यो । म हात झडकारेर भाग्न खोज्दा गालामा दुई झापड पनि हान्यो ।’
उनी श्यामविरुद्ध निवेदन लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलंगवा गइन् । तर उनी नपुग्दै श्यामले प्रहरीलाई फोनबाटै भनिसकेका रहेछन्, ‘एउटी महिला मेरो ऋण नतिरी मलाई नै कुटेर मेराविरुद्ध उजुरी लिएर आउँदै छे, त्यसलाई फर्काइदिनू ।’ राजनीतिक रूपमा समेत प्रभावशाली श्यामकै कुरा सदर भयो । फातमा रुँदै घर फर्किइन् ।
तीन वर्ष कतारमा काम गरेर छोरा फर्किए । उसले कमाएको सबै रकम फातमाले श्यामलाई बुझाइसकेकी थिइन् । तैपनि ऋणको पासोबाट उनी मुक्त भइनन् । बरु उल्टै मुद्दा खेप्नुपर्‍यो । फातमा र उनका छोराले १२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै श्यामकी छोरी इलाले उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मुद्दा दायर गरेकी छन् । चटपटेको ठेला राखेर गुजारा चलाइरहेकी फातमाले सुनाइन्, ‘बाँच्नु न मर्नु भएको छ ।’
रिना र फातमाको जस्तै कथा छ अधिकांश ऋणीको । प्रदेशीको ऋणको पासोबाट उम्किनकै लागि कतिले आफ्नो घरघडेरी बेचेका छन्, कतिले गरगहना र अन्य सम्पत्ति सकेका छन् । प्रदेशीले भने ऋण तिरिनसकेको कागज देखाएर सबैसँग रकम असुलिरहेका छन् ।
श्यामले परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै सबैजसोसँग दुईदेखि तीनवटा कागज गराएका छन् । भनेअनुसार नगर्नेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।
लालबन्दीकी पारु चौधरीले श्रीमान् सन्तलाललाई कुवेत पठाउन दुईवटा कागज गरेर श्यामबाट २ लाख ऋण लिएकी थिइन् । श्यामले पारु र उनका भिनाजु शम्भु चौधरीले जनही ४/४ लाख ऋण लिएको जाली कागजमा हस्ताक्षर गराए । उनका श्रीमान् करिब ५ वर्ष कुवेत बसेर फर्किए । श्रीमान्ले कमाएर पठाएको सबै रकम उनले साँवा र ब्याजतिर्ने भन्दै श्यामलाई बुझाइन् । तर ऋण सकिएको छैन ।
पारुका अनुसार उनले एक वर्ष हरेक महिना १०–१० हजार गरेर १ लाख २० हजार बुझाएकी थिइन् । पछि ५० हजार, ३० हजार र २ लाख बुझाइन् । यसरी ४ लाख तिरिसक्दा पनि श्यामले ऋण सकिएको भनेनन् । पारुले बाध्य भएर बिहेमा दिइएको कल्ली, घाँटी र कानका सुनका गहना सबै बुझाइन् । तैपनि दस लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै श्यामले उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मुद्दा दर्ता गरे । त्यो मुद्दामा अदालतले श्यामको पक्षमा फैसला गरिदियो । त्यसैका आधारमा अहिले उनी फरार अभियुक्त भएकी छन् । ‘पुलिसले पक्राउ गर्ला भनेर कहिले महोत्तरीको माइती, कहिले कता लुक्दै भाग्दै हिँडेको छु,’ उनले भनिन् ।
शारदादेवी चौधरीको दु:खको कथामा अझै धेरै गहिरो शोक मिसिएको छ । १८ वर्षकी छोरी आराधनालाई मिर्गौलाको रोग लागेपछि उपचार खर्चको खोजीमा उनी श्याम प्रदेशीकहाँ पुगेकी थिइन् । उनले ४ लाख रुपैयाँ ऋण सजिलै पाइन् । छोरी बचाउने आसमा उनले श्यामले भनेअनुसारको कागजमा ल्याप्चे लगाइन् ।
तीन महिना काठमाडौंको बयोधा अस्पताल र दुई महिना काठमाडौंकै सुमेरु अस्पतालमा उपचार गराइन् । ऋण र अनेकतिर खोजेको सापटी गरेर २० लाख रुपैयाँ खर्च भयो तर १८ वर्षकी फूलजस्ती छोरी बचिनन् ।
यता उनले लिएको ऋणको लहरो झांगिएर गलपासो बनेको छ । उनका अनुसार श्यामले फरक–फरक ८ वटा कागज गराएको छ । एउटा कागजमा १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको लेखिएको शारदाको दाबी छ । साँवा र ब्याज तिर्ने कुनै उपाय नभएपछि उनले जमिनका नाममा रहेको ८ कट्ठा बेचेर ८ लाख रुपैयाँ बुझाइन् ।
‘चार लाख तिर्न आठ लाख बुझाएँ तर श्यामले अझै तिर्नुपर्ने देखाएको छ,’ उनले भनिन् । बारम्बार ऋण तिर्न दबाब दिएपछि केही महिनाअघि स्थानीय सोनपी चौधरीसहित पाँच जना श्यामसँग वार्ता गर्न गएका थिए तर उनी टसको मस भएनन् । बरु उल्टै शारदाले ऋण नतिरको भन्दै उनले जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मुद्दा दायर गरे ।
श्याम प्रदेशीको ठगी धन्दाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रदेश २ को प्रदेश प्रहरी कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालय र सरकार हाँकिरहेका दलका उच्चपदस्थ नेताहरू जानकार छन् । नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य कमल बुढाथोकीले प्रदेशीबाट सयौं निरक्षर र दलित गरिब हरिकंगाल बनेको बताए । उनले मिटरब्याजको यस्तो धन्दाबारे गत फागुनमा नेकपा अध्यक्ष दाहाल सर्लाही आएका बेलासमेत जानकारी गराएको बताए ।
गत फागुनमा सर्लाहीको मुर्तियामा लागेको महोत्सवमा सहभागी हुन पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पनि दलका प्रतिनिधि र पीडितले ठगीको चंगुलबारे जानकारी गराएका थिए । गत जेठमा नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सर्लाही पुग्दा पनि स्थानीय नेता र पीडितले मिटरब्याजको धन्दाबाट भइरहेको ठगीबारे जानकारी गराएका थिए ।
मिटरब्याजबाट पीडित सोनपी चौधरीले जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्षमा फेरिएका आधा दर्जन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीका सबैजसो एसपीलाई जानकारी गराएको बताए । उनले भने, ‘सबैले हाम्रो कुरा सुनेजस्तो गरे तर कसैले न्याय दिलाएनन् ।’ स्थानीय नेता बुढाथोकीले श्यामको अनौठो कागजी जालमा खडा भएको ठगी धन्दाले आफूहरूलाई लज्जित बनाएको बताए । ‘ठगीको यस्तो बर्बर तरिका त पञ्चायतमा पनि हुन्थेन होला, हामी आफैं चकित छौं ।’
बुढाथोकीका अनुसार श्यामले एक जनासँग १९ वटासम्म कपाली तमसुकको कागज गराएको बताए । उनका अनुसार श्यामबाट १ सय ५० जनाले १ करोड ९ लाख ५ हजार ऋण लिएको देखिएको र उनीहरूले विभिन्न मितिमा साँवा र ब्याजसहित १ करोड ४७ लाख तिरिसकेको देखिँदा पनि श्यामले अझै साढे सात करोड तिर्न बाँकी रहेको कागज देखाइरहेको बताए ।
बुढाथोकीले जिल्लामा आउने प्रत्येक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख घटनाबारे जानकार भएको बताए । उनले केही अघिसम्म प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख रहेका डीआईजी हरि पाललाई पनि घटनाबारे अवगत गराएको तर केही काम नभएको सुनाए । उनले हालका डीआईजी प्रद्युम्न कार्कीलाई पनि यसबारे बताएको दाबी गरे । तर सम्पर्कमा डीआईजी कार्कीले यसबारे केही थाहा नभएको र जानकारी पाएपछि आफूहरूले अनुसन्धान थाल्ने बताए ।
त्यसो त डेढ वर्षअघि कान्तिपुरले गरेको यही घटनाको रिपोर्टिङका क्रममा सर्लाही हरिऔन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाईंले श्यामको मिटरब्याजबारे बताउँदै भनेका थिए, ‘साँवा र ब्याज तिर्नेलाई भर्पाइ नदिने र एउटै ऋणबाट वर्षौं शोषण गर्ने काम भइरहेको छ ।’ त्यतिबेला सर्लाहीका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष रेवती पन्तले पनि मिटरब्याजबाट श्यामले गरिरहेको ठगीबारे बताएका थिए । प्रदेश २ का नेकपा सांसद बेचु लुंगेलीले पनि श्यामले ऋणीहरूको उठीबास लगाउने गरी ब्याजको पासो थापेको बताउँदै भनेकी थिइन्, ‘फर्जी कागजका आधारमा न्याय मार्ने काम भइरहेको छ ।’
नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि मिटरब्याजको पासोमा परेकाको कथा सुनेपछि उनीहरूलाई न्यायको पहल गर्न सकिन्छ कि भनेर पहल थालिरहेका छन् । शनिबार पीडितहरू बसिरहेको गौशालाको एक होटलमा भेटिएका श्रेष्ठले पीडितको कथा सुनेपछि भने, ‘यो त सहनै नसक्ने खालको अन्याय भइरहेको छ । जनता अन्याय सहेर रुँदै बाँचिरहेका छन् भने हामीले राजनीति गर्नुको अर्थ के रह्यो र ? ’
श्रेष्ठकै पहलमा पीडितले केही दिनअघि नेकपा अध्यक्ष दाहालको निवासमै पुगेर पीडा सुनाएका थिए । श्रेष्ठकै पहलमा पीडितले गृहमन्त्री थापालाई पनि घटनाबारे बताएका छन् । श्रेष्ठले यस्तोखाले अन्याय र शोषण जनताले सहिराख्नुपर्छ भने हामीले सरकार बनाएको, राजनीतिमा लागेको के अर्थ भयो भन्ने प्रश्न गरे । उनले भने, ‘यो त आर्थिक ठगी मात्रै होइन, महिलामाथि घृणित व्यवहार गर्ने र सामाजिक–न्यायिक प्रणालीलाई कागजी खेलका भरमा हात लिने कुराको नांगो उदाहरण हो ।’
प्रदेशीको ठगी शैली
विपन्न, निरक्षर र दलित समुदायलाई श्याम प्रदेशी भन्नेबित्तिकै ऋण दिन तयार हुन्छन् । तर अधिकांशलाई आफूले भनेअनुसारका कागजमा ल्याप्चे लगाउन लगाउँछन् र दोब्बर–तेब्बर रकम लेख्छन् । कान्तिपुरले फेला पारेको कागजमा श्यामले १ सय ९९ जनालाई कागज गरेर ऋण दिएको देखिन्छ ।
श्यामले आफ्नो नाम मात्र नभई छोरी इला, ज्वाइँ रामबाहु साह, छोरा सुजय र श्रीमती रन्जुले ऋण दिएको कागज तयार पारेका छन् । जिल्ला अदालत सर्लाहीले मात्रै प्रदेशी र उनको परिवारका सदस्यले दायर गरेको ५० वटा मुद्दामा पक्षमा फैसला गरिसकेको छ, ३५ भन्दा धेरै मुद्दा अदालतमै छन् । पीडितका अनुसार श्याम प्रदेशीको मिटरब्याजको पासोमा पर्नेहरूमा रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीका स्थानीय छन् ।
प्रदेशीले सुरुमा ऋण दिँदा १ लाख दिए १० हजार र २ लाख दिए २० हजार ऋण दिएबापत भनेर कटाउँछन् । अनि ब्याजदर ३६ प्रतिशतसम्म तोक्छन् । एक दिन ब्याज तिर्न ढिला भए दैनिक १ हजारसम्म हर्जाना तिराउँछन् । साँवा तिरिसकेको बताएर कसैले थप रकम बुझाउन आनाकानी गर्‍यो भने सुरुमै गराएका विभिन्न कागजातका आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्छन् ।
त्यही कागजी खेललाई प्रमाण स्विकार्दै अदालतले उनीहरूलाई फिरादका लागि बोलाउँछ । निरक्षर र अदालती प्रक्रियाबारे सामान्य पनि जानकारी नभएका कैयन् ऋणी अदालतसम्म नपुग्दै उनीहरूको विपक्षमा फैसला भइसक्छ । कैयन्लाई त फैसलाकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गर्छ । श्यामको मिटरब्याजको पासोमा परेका सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका–४, करैयाका सोनपी चौधरीले पक्राउ पुर्जी पाउनेको संख्या मात्रै दुई दर्जनभन्दा धेरै हुने बताए । अदालती आदेशको भरमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पछिल्ला दुई वर्षयता भाग्दै लुक्दै हिँडेका उनले सुनाए, ‘दर्जनौंले अदालत र प्रहरीको डरमा घरगाउँ छोडेर हिँडेका छन् ।’
डेढ वर्षअघि पुसमा दुखनीदेवी चौधरी गाउँका अन्य पीडितसँगै काठमाडौं आएकी थिइन् । खर्च अभावमा अरूसँगै चिउरा र दालमोठको भरमा पशुपतिनजिकैको एक होटलको भुइँमा रात बिताएकी थिइन् । त्यतिबेला उनले मुखबाट तातो वाफ छोडदै प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘करकापमा पारेर के–के कागजमा ल्याप्चे गरायो । अब म न्याय खोज्न कहाँ जाऊँ ? ’ पछिल्लो डेढ वर्षमा केही बदलिएन । दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा ल्याएको पनि दुखनीले थाहा पाइनन् । उनले आफ्नै दु:खको खिल झन्झन् बिझ्दै गएको मात्रै थाहा पाइन् ।
साढे चार वर्षअघि उनले पाठेघरको उपचार गर्न श्यामबाट चार लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । यही ऋण तिर्न उनले साँवा र ब्याजसहित ८ पटक गरेर ६ लाख ६४ हजार बुझाइन् । दुखनीले पैसा तिरेको भर्पाइ कान्तिपुरसँग समेत सुरक्षित छ । ऋण तिर्नकै लागि उनले भएको एक कट्ठा घडेरीसमेत बेचेर तिर्दा पनि अझै ९० लाख बाँकी रहेको कागज श्यामले देखाइरहेका छन् ।
पशुपति भाकेर फर्केको डेढ वर्षमा पनि केही बदलिएन । उनले सुनाइन्, ‘अदालतमा मुद्दा छ । त्यही भएर हामी भागी–भागी हिँडेका छौं ।’
न्यायको खोजीमा काठमाडौं आएको टोलीमा सर्लाही करैयाकी रम्भाकुमारी चौधरी पनि छन् । १० लाख ऋण नतिरेको भन्दै श्याम प्रदेशीले उनीविरुद्ध ०७३ साउन ६ गते सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । ०७३ माघ २ मा न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले फैसला गर्दै प्रतिवादीले अदालती तारेखसमेत गुजारेको र कपाली तमसुक हेर्दा ऋण लिएको देखिँदा वादी श्याम प्रदेशीको दाबी पुग्ने ठहर गरेको छ ।
अदालती आदेशपछि पनि ऋण नतिरको भन्दै उनका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । रम्भाले आफूले निरन्तर फोनमार्फत धम्की खेपिरहेको र पक्राउ परिने डरले भाग्दैहिँड्नुपरेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘काठमाडौंले न्याय दिन्छ कि दिन्न हेर्न बाँकी छ ।’
ठगीको जालोबारे जानकारी लिन खोज्दा श्याम प्रदेशीसँग सम्पर्क हुन सकेन । फोन सम्पर्कमा नभेटिएका उनले एसएमएस पठाउँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । (कान्तिपुरबाट)